Ukujonga kwakhona: Igqala leXesha leKorra lesi-3 - Inkcubeko Yopopu
Ngexesha layo lesithathu lokuNqonqoza, iNqaku likaKorra lithatha iAvatar Franchise ukuya kwelinye inqanaba
Kwi Igosa Kanye Ixesha lesithathu, i I-Avatar I-franchise iye yawazi kakuhle amanqaku.
Okokugqibela, kukho umlilo wenene. I-Avatar: Umxholo we Kanye Ixesha lakamva nje (eliqukunjelwa namhlanje nge-12: 00 pm EST, nge UNickelodeon ) ibe yinto efezekisiweyo emangalisayo, ebaleka ukusuka ekuqaleni kancinci ukuba, kuyo yonke imeko, ibe I-Avatar ii-franchise zibaleka ngokugqibeleleyo. Ayisiyonto encinci ithathela ingqalelo ukuphakanyiswa kothotho lwabazali I-Airbender yokugqibela , eyaziwayo ngokufanelekileyo njengenye yezona zinkulu kubantwana ibonisa (ihambelana kakuhle nenkqubo yabantu abadala, nayo); zenziwe kakuhle, zibhalwe kakuhle, kwaye ziyilwe ngocoselelo, I-Airbender yokugqibela izise umhlaba wayo owahlukileyo kodwa oqhelekileyo wokugoba ebomini ngaphezulu kwamaxesha onyaka amathathu kunye nebali elinye le-epic.
Kanye Wayenezihlangu ezinkulu ukuzalisa, kodwa ngokufikelela kwincwadi yesiThathu, Guqula, I-Avatar ifikelele kumxholo opheleleyo wokubalisa.
Ngokuhambelana nesihloko sayo, uTshintsho lufumana I-Avatar Abalinganiswa abathatha iindlela ezininzi kwi-Avatar Korra ( UJanet Varney ) uguqule ngokungenakubuya umhlaba ngelixa bezama ukunika ulungelelwaniso lokomoya kunye nezopolitiko. IiKorragets zikhutshwe kwiSixeko saseRiphabhlikhi, i I-Avatar Worlds de facto capital, ngamagosa atyisiwe ziingxaki ezidalwe kukugcwala kwemimoya evunyelweyo kwihlabathi lezinto ngezenzo zakhe ekupheleni kwencwadi yesiBini, iMimoya. Xa abantu beqala ukubhabha kubonakala ngathi akwenzeki, kufuneka ancede umcebisi wakhe, iTenzin. UJK IiSimon ), umbelekisi uSizwe somoya omtsha ukuba abe khona. Ulawulo lomhlaba olungqwabalala nocinezelayo lwe-Queens lubonisa ingxaki enkulu yokuziphatha kwi-Avatar, umsebenzi wayo, ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, ukugcina imeko yoxolo. Kwaye loo nto ayibandakanyi amaxesha amabi amakhulu: i-airbender entsha enamandla uZaheer ( UHenry Rollins ) kunye nehlelo lakhe leRed Lotus anarchist.
Onke la macebo ayadika, ukuya kumanqanaba ahlukeneyo, ngaphambi kokubilisa kwisiphelo sexesha elinamaxesha amabini, Faka iViant / Venom yeRed Lotus, uloyiso olungenakuthelekiswa nanto I-Avatar amandla okubalisa amabali. Ulandelelwano lokulwa luyamangalisa, lusebenzisa ubuchule bokugoba ukugqiba abo bachasayo (ndikhwaze ngokoqobo iBoom! Kwiscreen xa umlilo-bender PLi wabethwa ngesikrweqe sombuso, esenza ukuba aqhume intloko yakhe ) kunye namandla oopopayi apheleleyo eStudio Mir, abakwaziyo nokujova ubuchule obungacacanga kwinto elula njengabantu abaliqela abahleli bison. Ukudubula okude, okungaphazanyiswanga kukaKorra olwa noZaheer emoyeni kuvusa iimfazwe ezilikhulu zasemoyeni kumdlalo bhanyabhanya wamaqhawe (kunye ne-Aangs eyokulwa noMlilo u-Lord Ozai), kodwa ubadlula ngamandla kunye namandla aphefumlayo.
Iiresiphi ezimhlophe zasekhaya ezenziwe kwasekuqaleni
Ngokuchasene ngokucacileyo neNcwadi yesiBini, iMimoya, kunye nokunye okuninzi I-Airbender yokugqibela , Ngokwesiqhelo ibonisa yonke into yabalinganiswa ebonisa ukuba ibalulekile. Isenzo sahlulwe saya kumaqela amahlanu ahlukeneyo ukunika wonke umntu into ebalulekileyo yokwenza, ehambelana nobuchule babo. Oodade baseBeifong, uLin noSu, bakhupha i-PLi, ekugqibeleni bangcwaba i-hatchet kwinkqubo. IMako kunye neBolin isikwere ngokuchasene nengalo ye-octopus waterbender iMing-Hua kunye neqhula eliqubha udaka uGhazan, ngokwahlukeneyo, bebonisa amandla abo okuzimela ngokuzimeleyo kwiQela leAvatar. Isizwe somoya esincinci kuqala siyazikhulula kwabanye oonogada beRed Lotus kwaye emva koko iba ngamagorha okugqibela onyaka, esenza isitshingitshane sokuthintela uZaheer ekuthatheni iKorra. Ukuthunyelwa komlinganiswa ongalunganga kuye kwenzeka kulo lonke ixesha lonyaka, ukuya kuthi ga kubalinganiswa abatsha abanjengoSu Beifongs intombi kunye noBolins bathanda umdla, u-Opal. Nokuba umntu akakho kwiscreen, kulula ukuyifumana into abayiyo, kwaye uyazi ukuba yonke into iqhubeka ngokungathandekiyo kwabanye I-Avatar Nokuba sele benganxibanga noKorra okanye uZaheer.
Ukuphela kwentloko-ejikelezayo, iyelenqe lokwaphuka libonisa iindlela apho Kanye , uthotho lwabantu abadala ngakumbi kuyilo, isebenzise inkululeko eyandayo ukugqitha kwezinye I-Airbender yokugqibela impumelelo. Oko ayikuthethi yonke kuthotho olungcono, kuba ayisiyiyo, kodwa kukho izinto ezithile ngokulula Kanye Ungayenza loo nto I-Airbender yokugqibela cannt, kunye noTshintsho bafumanisa ukuba umboniso uyisebenzisa ngokupheleleyo loo nto. Nokuba iiBolins zizama icebo lokunceda amahlaya kwangoko kwisiphelo sokuphosa ibuye ibe sisiqabu ukuba linobuzaza kangakanani ixesha lonyaka, phantse ngaphandle kwesilumkiso-luhlobo lwezinto ezinokuthi zenziwe nguAang, Sokka, kunye noToph kumajoni eSizwe soMlilo kwaye bahamba nge, kodwa akukho mntu unokuyithatha ngokungathí sina ngoku.
Ngokukodwa, ukuthelekiswa koonogada beLotus abaBomvu kunye nalawo majoni oMlilo weSizwe acebisa ukuba kutheni utshintsho lelona xesha lilungileyo Kanye okwangoku. Njengalo naliphi na ibali elilungileyo, i I-Avatar I-franchise ihlala ilungile kuphela njengabenzi bayo. Oko kwakuthetha I-Airbender yokugqibela wayehlala emnandi-u-Ozai inokuba wayengumlawuli okhohlakeleyo olwandle owayethambekele kulawulo lwehlabathi, kodwa wayenobunqabile (kwaye evakaliswe kakuhle nguMark Hamill) kangangokuba ayibalulekanga. Ama-Azulas maxa wambi obuhlanya obuhlasimlisayo kunye nokufuna ukugqibelela kwamenza wangakwazi ukugxotha, kwaye ke, uZuko ngomnye wabalinganiswa bakamabonwakude abaphambili. Ukuthatha iminyaka engama-70 kamva, Kanye Umntu wokuqala ochasene ne-bender u-Amon wayeyintshaba enzulu. Kodwa kwiMimoya, ababhali beza nebali, ngakumbi okanye elincinci, elilelona bali libalaseleyo- uKorra elwa nomoya wokuqala ombi uVaatu, ephinda ungquzulwano olwenza i-Avatar kwasekuqaleni-kodwa uVaatu wayeyikhathuni, kwaba nzima inkathalo. (Ukubhala ngokudibeneyo iVaatus umntu osebenzisana naye u-Unalaq olilungu leRed Lotus kubonakala ngathi uyohlwaya.)
uyenza njani ikeyiki eluhlaza
Kwindawo yabo emfutshane, iRed Lotus ingqina ukuba ziintshaba ezinzima, ezoyikekayo, kunye neentshaba ezinolwazelelelo ngokubanzi. Nokuba uchasene nobungqongqo bomhlaba uQueens, iZaheers anarchism ayinyanzelekanga njengoko kunokuba njalo-ukubhengeza kwakhe isiphithiphithi esipheleleyo kwenza ukuba kube lula kakhulu ukumelana naye. Kodwa eyona nto yenza ukuba iingcamango zeZaheers zingabinanto uHenry Rollins osebenza ngezwi (its bad too hes the Red Lotus kuphela enokuthi ivele kwiNcwadi yesine, kuba iGhazan kunye neMing-Hua mhlawumbi ngamashumi amahlanu amaxesha anomdla kwaye ahlekisayo) okanye ukwala kwakhe urhulumente -Ukulahlwa koluntu, ubudlelwane phakathi kwabantu. UZaheer ukholelwa kwelokuba oyena mntu uphumeleleyo, kwaye ulungile, ufumana amandla angazange abonwe ngaphambili okubhabha ngokuzikhulula kuko konke okuqhotyoshelweyo, kodwa loo nto ayithethi ukuba uZaheer ngokwakhe, osenokuba ngoyena unamandla kwi-batar non-Avatar emhlabeni, uphuma esoyisa kuwo wonke umntu. Kuthetha ukuba iqela labantwana, elisebenza kunye, limzisa emhlabeni.
Oko kugxininisa amaxesha onyaka amandla amakhulu. Utshintsho, kwiindlela ezininzi, kukufikelela kwincopho ye I-Avatar ii-franchise zopolitiko. Ngendlela efanayo nohambo lweAangs lwamvumela ukuba abone indlela izizwe ezahlukileyo ezilungelelaniswe ngayo, uKorra ubona ukungalingani entliziyweni kaBa Sing Se (phambi kokubulawa kukaZaheers ngoKumkanikazi woMhlaba) kunye nemigaqo yedemokhrasi emva kweSus metal koloni. Kwaye nangona iyelenqe eliphambili libonakala ngathi lijolise ekoyiseni uZaheer kunye neRed Lotus, yayihlala iyenye into.
Inkulumbuso iqala ngoBumi efumanisa ukuba uhamba ngenqwelomoya kwaye iphela ngoTenzin evakalisa ubuhlanga bakhe bomoya I-Avatar ilingana neGreen Lantern Corps okanye iCaine ukusuka ikung fu , ukujikeleza umhlaba kunye nokulungisa izinto ezingalunganga. Nangona esi sigqibo sibonakala ngathi singangqina ngaphambi kwexesha, sikwenza nengqondo egqibeleleyo-iSizwe soMoya santlandlolo sasuswa emhlabeni, kodwa ukuzibophelela ngokwasemoyeni ukulinganisela kunakho, kwaye kuhlala kufanelekile, ukuthatha isenzo. Utshintsho, ngokuyinxenye, libali lendlela uKorra abaleke ngayo iRed Lotus, kodwa ngakumbi malunga nokutshatyalaliswa kwesizwe esinye nokuzalwa kwesizwe esitsha.
Ke ngoku sikumda wexesha lokugqibela le- Kanye , uBukumkani boMhlaba butshabalalisiwe, iSizwe somoya saphinda sazalwa, kwaye i-Avatar inokuthi ibe buthathaka ngokusisigxina. Ngaba ibhalansi ibuyile? Hayi umboniso. Ubukhulu boTshintsho benza ukuba iiNickelodeons ngelishwa-inkqubo-ukugoba, ukubetha ixesha lonyaka nazo zonke iiveki zesaziso zokulwa nokuvuza kunye nokutsala iziqendu zokugqibela kwidijithali-kuphela, konke kuyacaphukisa. Ukutshintsha kokuphakathi kunokuba yayisisiqalo kwasekuqaleni, kodwa njengo-co-creator uBryan Konietzko wakhalaza kwi-Comic-Con, olu tshintsho aluzange luphathwe kakuhle. Utshintsho lubonakala ngathi lolwezinga lokulinganisa kunye nomxholo, nto leyo engamangalisiyo xa kuthathwa utshintsho olumnyama ngokumnyama. Ityhefu ngento enokuthi ingene nzulu kunempilo yakhe yasemzimbeni. Ukanti iKorra ivelisa into enqabileyo- isiphelo esisemthethweni esikhuthazayo kodwa esingaqinisekanga ngaphandle kokuya kwimpumelelo ethe ngqo okanye Ubukhosi buhlasela emva Isimbo esibuhlungu. I-Avatar Abalinganiswa baqalekisiwe ukuhlala kumaxesha anomdla.
Ewe kunjalo, zikhona iingxaki-phakathi kwazo, uSu unyusa ityhefu kwi-Korra kunuka ingonyama enguFudo UThixo evela kumatshini , Kunye nokuxoka kukaLotus oBomvu malunga nokubuyisa i-airbenders ngokubhekele phaya kunciphisa ukuthembeka kwabo bachasayo. Kodwa ezona zikhalazo zinkulu ngeli xesha lonyaka-le Ncwadi yesithathu ibikukubuyela umva koko I-Avatar Iqela liyazi ukuba linokuqhuba kakuhle, okanye liyadika-kufuneka liwe kude, kude xa yonke enye into isenziwa kakuhle. Ezi mfuno azikho Kanye ukwenza nantoni na entsha ngokutsha xa I-Avatar Iqela ngoku libonisa, amandla angenakuphikiswa.
U-Eric Thurm ngumbhali onegalelo. Iitweets Apha .
ukuzinzisa ukhilimu otyhidiweyo ngekhilimu yetartar
ngubani othi undibulala ngamancinci
uyenza njani ikeyiki eqengqelekayo
super nazi ipenis yenkululeko abalweli benkululeko
Leslie jones twitter umdlalo weetrone